ယခုလ (၈)ကြိမ်မြောက် သိန်း(၁၀၀၀) ဆု ထီလက်မှတ် ပိုင်ရှင် အငြင်းပွားမှု (ရုပ်သံ) – XB Media Myanmar
သိန်း(၁၀၀၀) ထီပေါက်မဲအရှုပ်တော်ပုံ ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခု တက်လာပြီး ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်ကို မျှဝေပေးကြဖို့ပါ တောင်းဆိုထားမှုကြောင့် AlinnMyay(အလင်းမြေ) မှ တဆင့်ပြန် လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ Zin Zin အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ မူလတင်ပြထားသည့်အတိုင်း တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
ယခုလ(၈)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဆုမဲသိန်း(၁၀၀၀)ဆုမဲ ကခ – ၁၂၃၅၉၃ ကို ကျွန်မတို့ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်မတို့သည် ယခုနံပါတ်ကို (၂၉.၉.၂၀၁၉)သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ် အမထံ မှဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပါသည်။ online မှတဆင့်ဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ထီလက်မှတ် မှာ ကျွန်မတို့၏လက်ထဲတွင်မရောက်လာသေးသော်လည်း ငွေကိုသူငယ်ချင်း ထံသို့ပေး ချေပြီးဖြစ်ပါသည်။
(၃၀.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမန္တလေးလာလျှင် ယူလာခဲ့ပါရန်မှာ ကြားထားသောကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် သူ၏ကိုယ်စားလှယ်အမထံသို့ ထီလက်မှတ်သွားရောက်တောင်းယူချိန်တွင် အလုပ်ကိစ္စများအကြောင်းပြပြီး မပေးခဲ့ပါ။
(၁.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ထီ ပေါက်စဉ်တိုက်ချိန်တွင်ကျွန်မတို့၏ ထီလက်မှတ်မှာ သိန်း(၁၀၀၀) ပေါက်မဲနံပါတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဝမ်းသာအားရဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်အမသည် ကျွန်မတို့၏ပေါက်မဲလက်မှတ်ကိုထုတ်မပေးတော့ပဲ သူအပိုင်လုပ်ယူလိုက်ပါသည်။
ကျွန်မတို့တွေ ကိုယ်စားလှယ်အမရှိရာအရပ်သို့ သွားရောက်ညှိနှိုင်းချိန်တွင် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းပြချက်များနှင့် အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့ထံတွင် သက်သေအထော က်ထား အစုံအလင်ရှိပါလျှက်နှင့် ဘာကြောင့်များ မတရားသဖြင့်ခံခဲ့ရပါသလဲ?
(ယခုအဖြစ်ပျက်များသည် အမှန်တကယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းအ ရာများဖြစ်ပါသည်) ကျွန်မတို့ရဲ့ ကံကကောင်းတာလား? ကံကဆိုးတာလား?
သူများရဲ့ကံတရားနဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးများစွာနှင့် ယခု မိသားစုပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပြု၍ ဒီ video file လေးကိုနားထောင်ကြည့် ပေးကြပါရှင်..”
Source – Zin Zin’s FB
ယခုသတင်းကို မိတ်ဖက်မီဒီယာ ALinnMyay ၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သမီးလေးမှ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သိန်း(၁၀၀၀) ထီပေါက်မဲအရှုပ်တော်ပုံ ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခု တက်လာပြီး ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်ကို မျှဝေပေးကြဖို့ပါ တောင်းဆိုထားမှုကြောင့် AlinnMyay(အလင်းမြေ) မှ တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ Zin Zin အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ မူလတင်ပြထားသည့်အတိုင်း တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
ကျွန်မတို့သည် ယခုနံပါတ်ကို (၂၉.၉.၂၀၁၉)သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ် အမထံမှ ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပါသည်။ online မှတဆင့်ဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ထီလက်မှတ်မှာ ကျွန်မတို့၏လက်ထဲတွင်မရောက်လာသေးသော်လည်း ငွေကိုသူငယ်ချင်းထံ သို့ပေးချေပြီးြ ဖစ်ပါသည်။
(၃၀.၉.၂၀၁၉) ရကျနေ့တှငျ သူငယျခငြျးဖွဈသူမန်တလေးလာလြှငျ ယူလာခဲ့ပါရနျ မှာကွားထားေ သာကွောငျ့ သူငယျခငြျးဖွဈသူသညျ သူ၏ကိုယျစားလှယျအမထံသို့ ထီလကျမှတျသှားေ ရာကျေ တာငျးယူခြိနျတှငျ အလုပျကိစ်စမြားအကွောငျးပွပွီး မပေးခဲ့ပါ။
(၁.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ထီ ပေါက်စဉ်တိုက်ချိန်တွင်ကျွန်မတို့၏ ထီလက်မှတ်မှာ သိန်း(၁၀၀၀) ပေါက်မဲနံပါတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဝမ်းသာအားရဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်အမသည် ကျွန်မတို့၏ပေါက်မဲလက်မှတ်ကိုထုတ်မပေးတော့ပဲ သူအပိုင်လုပ် ယူလိုက်ပါသည်။
ကျွန်မတို့တွေ ကိုယ်စားလှယ်အမရှိရာအရပ်သို့ သွားရောက်ညှိနှိုင်းချိန်တွင် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းပြချက်များနှင့် အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့ထံတွင် သက်သေအထောက် ထားအစုံအ လင် ရှိပါလျှက်နှင့် ဘာကြောင့်များ မတရားသဖြင့်ခံခဲ့ရပါသလဲ?
(ယခုအဖြစ်ပျက်များသည် အမှန်တကယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်း အရာများဖြစ်ပါသည်) ကျွန်မတို့ရဲ့ ကံကကောင်းတာလား? ကံကဆိုးတာလား?
သူမြားရဲ့ကံတရားနဲ့ပေါကျခဲ့တဲ့ငှကွေေးမြားစှာနှငျ့ ယခု မိသားစုပြောျရှှငျပါစလေို့ ဆုတော ငျးေ ပးပါတယျရှငျ
ကျေးဇူးပြု၍ ဒီ video file လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပေးကြပါရှင်..”
Source – Zin Zin’s FBယခုသတင်းကို မိတ်ဖက်မီဒီယာ ALinnMyay ၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သမီးလေးမှ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။